HomeWararka MaantaGoolhayihii Ay U Jabtay Leicester City Oo Garoomada Kusoo Laabtay
Goolhaye Kasper Schmeichel ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxdiisa Leicester City, kaddib markii uu garoomada ka maqnaa tan iyo bishii November oo uu gacan ka jabay, waxaana uu diyaar u yahay ciyaarta Sabtida ee Stoke City.
Kasper Schmeichel oo ay da’diisu tahay 30 jir ayaa dhaawac ka gaadhay gacanta midig ciyaar ay kooxdiisa Leicester barbar dhac goolal la’aan ah la gashay kooxda FC Copenhagen 2 November.
Leicester City ayaa laba ciyaarood oo kaliya guuleysatay siddeeddii ciyaarood ee u dambeeyey, wakhtigaas oo la dareemay in ay bannaan tahay booska Kasper Schmeichel,
Claudio Ranieri ayaa khamiistii u sheegay warbaahinta in Schmeichel uu tababarka si fiican ula dhamaystay kooxdiisa, laakiin Jimcaha lagu samayayo shaybaadh si loo hubiyo inuu ciyaari karo Sabtida iyo inkale.
Schmeichel oo ah goolhayaha xulka qaranka Denmark ayaa bishii August heshiis cusub oo shan sannadood ah u saxeexay Leicester oo uu dhamaan 38-kii ciyaarood ee xili ciyaareedkii hore uu u wada saftay, kuwaas oo 15 ka mid ah aan gool laga dhalinin.
Leicester ayaa sannadkii 2011 ka soo iibsatay Kasper Schmeichel kooxda Leeds United, waxaana uu u saftay in ka badan 200 ciyaarood.
Hordhac: Manchester City vs Sunderland
13/08/2016 Abdiwahab Ahmed